China Wooden zokwazisa izinto mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izinto zokwazisa zomthi Ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu okanye uyilo. Ogqibeleleyo ukuhombisa ikhaya, njengesikhumbuzo, intengiso kunye nezipho zokwazisa. Ivumba lendalo kunye nemvakalelo entle. Ilungele ukuqokelelwa. Eyona ndlela ibalaseleyo yokubopha ukubambelela kokudibanisa ...
Izinto ezisemgangathweni zeenkuni, i-ECO-friendly. Ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu okanye uyilo. Ogqibeleleyo ukuhombisa ikhaya, njengesikhumbuzo, intengiso kunye nezipho zokwazisa. Ivumba lendalo kunye nemvakalelo entle. Ilungele ukuqokelelwa. Eyona ndlela ibalaseleyo yokubopha iinjongo zokufezekiswa kweshishini kwisicwangciso sakho sesipho.
Izinto eziphathekayo: I-Beech / basswood / MDF
Inkqubo yelogo: Ukuprinta nge-Offset / iphepha le-foil kunye nokuprinta okungasasebenziyo / ukuprinta kwe-silkscreen / ukukrola kwe-laser.
Egqithileyo Imihombiso ye-Acrylic, iithegi kunye nabanye
Ukudluliselwa kweLanyards yobushushu